ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာ	December 3, 2010
ဒီလိုကမ္ဘာ့သမိုင်းအဆက်ဆက်က အမျိုးသားရေးဝါဒတွေကို လေ့လာပြီး၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင် Ignatieff က civic nationalism နဲ့ ethnic nationalism ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကို ခွဲခြားရှင်းပြဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုဟာ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင်၊ ဘာသာစကား ဆိုတာတွေအပေါ်မှာ လုံးဝခွဲခြားမှုမရှိတော့ပဲ နိုင်ငံတော်ရဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒ (nation’s political creed) အပေါ်မှာပဲ တညီတညွတ်တည်း လက်ခံကျင့်သုံး ယုံကြည်ချက်ရှိနေတာကို civic nationalism လို့ခေါ်ပါတယ်။ အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်အများစုမှာ ဒီ civic nationalism ကို အခြေခံတဲ့အတွက် အသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာ အခက်အခဲတွေ နည်းပါးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုတွေမဟုတ်ပဲ အာရှ၊ အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာကျတော့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေဟာ ကြာမြင့်တာတွေ၊ အခက်အခဲတွေအများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့တွေရဲ့ nationalism က များသောအားဖြင့် ethnic nationalism ပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။
Ferdinand, P. (1997) ‘Nationalism, Community and democratic transition in Czechoslovakia and Yugoslavia” in Potter, D., GoldBlatt, D. (eds) Democratization,Polity Press, Cambridge
ပြန်ခေါက်ထားခဲ့ပါ..>>>Posted by Khin Ma Ma Myo , Links to this postLabels: တိုင်းရင်းသားရေးရာ
ဘယ်သောင်းထွန်းလဲမသိဘူး၊ခွေးပါးစပ်ကနတ်စကားလား? Who Is Thaung Tun? Is it Noble Speaks from Dog’s Mouth?